नेपालमा कम्युनिष्ट शासन होइन पक्षपाती शासनको सुरु-रामचन्द्र पौडेल – SajhaPana
सोमबार, असार १३,२०७९
नेपालमा कम्युनिष्ट शासन होइन पक्षपाती शासनको सुरु-रामचन्द्र पौडेल
साझा पाना २०७५ असार १० गते ११:५३ मा प्रकाशित
जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले अन्यौलता र निराशामा रहेका देशभरका कार्यकर्ताहरुलाई एकहदसम्म आश्वस्त पार्ने काम गरेको छ । सभापतिहरुले आफ्ना कुराहरु निर्धक्क राख्ने साहस पनि देखाउनुभएको छ । नैतिक साहस पनि सभापतिहरुले देखाउनुभएको छ । सभापतिहरुले पार्टी सुधारका केहि विषयहरुलाई उठाउनुभयो । म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिदै उहाँहरुलाई स्यालुट गर्दछु । साथै जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलालाई राम्रो व्यवस्थापन र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा मकवानपुरका पार्टी सभापति, जिल्ला कार्यसमितिका सवै साथीहरु तथा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा सवै साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
हामी अहिले धेरै चुनौतीपूर्ण घडिमा छौ । यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीलाई विधी र विधानका आधारमा मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । अहिले सम्म विधी र विधानको पालना हुन नसक्दा हामी चुनौतीपूर्ण घडिमा आइपुगेका हौं । अब हामी विधानको दायरामा रहेर पार्टी संचालनको प्रयास गछौं । अब विधी सम्मत काम गर्नुपर्छ ।
नयाँ विधानको मस्यौदाका सम्बन्धमा पनि सुझाव दिनुभएको छ । विधान मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापतिहरुलाई पनि समावेश गराउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अब विधान मस्यौदा समिति मात्र होइन अन्य विभागहरु अनुसाशन समिति, निर्वाचन समिति पनि तत्काल बनाउनुपर्ने छ । यी सवै काम अब विधी र विधान अनुसार सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ । हाम्रो विधानमा प्रदेश समिति बनाउने भन्ने छ । प्रदेश समिति बनाउनका लागि सम्बन्धीत प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनीधिहरुको सम्मेलनले बाँकी कार्यकालका लागि प्रदेश समिति बनाउने गरि काम अगाडि अब बढाउनुपर्छ । अब छिट्टै प्रदेश अधिवेशनहरु हुनेछन् ।
अहिले मुलुकमा सवैभन्दा गम्भिर विषय ससस्त्र द्धन्दकालमा कब्जा गरिएको जग्गालाई अहिले कम्युनिष्ट सरकारले बैधानिकता दिने प्रयास थालेको छ । यता तर्फ हाम्रो ध्यान दिनुपर्छ । हिजो माओवादीको द्धन्दमा कब्जा गरिएका जग्गालाई अहिले जो जो ले कब्जा गरे उसैका नाममा बैधानिक रुपमा रजिष्ट्रशन दिने काम हुने भएको छ । माओवादीले द्धन्दकालमा जबरजस्ती गरेका लिखतलाई अहिले मालपोतबाट बैधानिकता दिने प्रयासलाई कांग्रेसले रोक्न पर्छ । बैयक्तीक स्वतन्त्रताको रक्षा कांग्रेले गर्न सक्नुपर्छ । ३० विगा जमिनका मालिकले ३ विग्गा जग्गा कब्जा गरेको । रुकुम रोल्पा लगायतका ठाँउहरुमा कति जग्गा कब्जा भएको । हिजो विस्तृत शान्ति संझौता लगायतका शान्ति प्रक्रियाका काम हुँदा तत्कालिनन एमाले पार्टी यो मुद्दामा हामीसंग थियो । अहिले एमाले कहाँ हुन्छ हामीले हेर्नुछ ।
अर्को कम्युनिष्टहरुले पक्षपातको शासन सुरु गर्दैछन् । यहाँ माक्सवाद, साम्यवाद जनवाद केहि होइन पक्षपातको शासन सुरु हुँदैछ । गाँउ गाँउमा कम्युनिष्टहरु पक्षपातको शासन सुरु गरेका छन् । गाँउ गाँउमा शिक्षकहरु माथि पक्षपात सुरु भएको छ ।
वजेट विनियोजनमा पक्षपात सुरु भएको । नेपालमा कम्युनिष्ट शासन होइन पक्षपाती शासनको सुरुवात भएको यो पक्षपातको राजको विरुद्धमा कांग्रेसले जेहाद छेड्नु ।
नेपाली कांग्रेसका सामु धेरै चुनौती छन भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छ । यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि हामीले वारफुटिङमा काम गर्नुपर्छ । यो वारफुटिङ भनेको के हो भने एकै पटक दिमागले १० वटा कुरा सोच्ने ११ वटा निर्णय गरेको काम गर्ने हो । यो स्पिडमा काम गरेर हामील अब कर्मशील कांग्रेस बन्ने बाटोमा सवै लाग्न जरुरी छ । कर्मशील काग्रेस भएर हामीले देशभर जानुप¥यो । वडा वडामा टोल टोलमा जनतासंग छलफलमा जानुप¥यो । जनतासंग बुझ्न प¥यो । जनताका समस्या के के छन भनेर । जनताले कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर हामी अब गाँउ गाँउ टोल टोलमा पुग्न प¥यो ।
अब यो भेलामा सवैभन्दा बढि पार्टीमा एकताको विषय उठ्यो । म त सधै पार्टी एकताको पक्षधर हुँ । कुनै बेलामा मैले पार्टीमा एकताको कुरा गर्दा सवैले मध्यमार्गी भन्ने गरेका थिए । त्यसैले पार्टीमा एकताको सवैभन्दा धेरै चिन्ता मलाई छ । गुटबन्दीको पक्षमा म छैन् । त्यसैले मैले पटक पटक सभापतिलाई भनेको छु, सिंगो पार्टीको सभापति बन्नुभयो अब सिंगै कांग्रेसलाई आफ्नै ठान्नुस भनेको छु । नेतृत्वको नजर सवै कार्यकर्तामा समान रुपले पुगोस भन्ने मेरो इच्छा हो । तर नेतृत्वको नजर नपुगेका नेता कार्यकर्ताहरुको आवज मैले बोल्दै आएको छु । एकताका लागि न्याय निष्पक्षता र पारदर्शी मुल्याङकन आवश्यक छ ।
मैले कांग्रेसलाई घाटा हुने काम गरेको छैन् । कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सभापतिलाई सुझाव दिएको छु । कांग्रेसलाई घाटा हुन्छ भनेर चुनाव अगाडि धेरै समस्या हुँदा पनि मैले धेरै बोलिन तर चुनाव पछिको समिक्षामा धेरै कुरा उठेका छन् । अहिले हाम्रो भोट बढेको तर्क गरिन्छ तर सवै साना पार्टीहरुको भोट यो पटक गणना भएन उनीहरुको भोट पनि जोडिदा हामीलाई ३३ प्रतिशत पुग्यो कम्युनिष्टहरुको भोट ४८ प्रतिशत पुगेको हो । अब म देशभर कर्मशील कांग्रेस बनाउने अभियान लिएर पार्टीमा एकताको सन्देश सहित देशभर अभियान लिएर जानेछु ।
क्याटेगोरी : विचार/बहस
ट्याग : #रामचन्द्र पौडेल
भूउयोगमा सरकारको अपरिपक्क निर्णय अधिवक्ताः राजु खत्री
जबज, स्थानीय तहमा एमालेको खुम्चिएको उपस्थिति र आत्मसमिक्षा
किन बनाए प्रचण्ड-माधवले एमसीसीलाई ‘रबरको हात्ती’ ?
स्मृति स्वरूप स्मृति ग्रन्थ
१टोखामा १४ हजार १८६ मत गन्दा कसले लिए अग्रता ?
२प्यूठानको गौमुखीमा गठबन्धनले नैतिक पतन भएका गिरीलाई उम्मेदवार बनाएपछि
३तारकेश्वरको मेयरमा कांग्रेसको तर्फबाट कृष्णहरि मर्हजनको चर्चा , अरु को को ?
४टोखा अपडेट : कस्तो छ मेयरको मत परिणाम ?
५तारकेश्वरको काभ्रेस्थलीबाट पक्राउ परेकी महिला मानव बेचविखन गरेको आरोपमा जेल चलान
६यि हुन टोखामा मेयर अधिकारीले पाँच बर्षमा गरेका १३ महत्वपूर्ण काम
७अपडेट : यस्तो छ तारकेश्वर वडा नं १ को पछिल्लो मत बिवरण
८अपडेट : यस्तो छ तारकेश्वर वडा नं ३ को पछिल्लो मत बिवरण
Powered by Three Star Media | © Copyright 2022, All Rights Reserved with SajhaPana | Design & Developed By : Resham